﻿ यस्ता छन्, इटहरी ‘टुक्रिँदा’ का फाइदाहरु
यस्ता छन्, इटहरी ‘टुक्रिँदा’ का फाइदाहरु
- विराट अनुपम
सरकारले गठन गरेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा इटहरी चर्लक्कै दुइ चिरा पारिएको छ । हाइवे दक्षिण र उत्तर गरे जस्तो गरेर इटहरी संघीय र प्रादेशिक चुनावको लागि दुई चिरा भएपछि स्थानीय नेताहरुको आक्रोश सार्वजनिक रुपमै पोखिएको छ ।
इटहरी कांग्रेसका सभापति हेमकर्ण पौडेलले ‘राजनीतिक दाउपेजको शिकार बनाएर’ गरिएको ‘इटहरी विभाजनको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण’ भन्दै आलोचना गरेका छन् । यस्तै इटहरी एमालेका इन्चार्ज रामप्रसाद चौलागाइले इटहरी विभाजनको आलोचना गर्दै आधा इटहरीको केन्द्र दुहबी र आधाको केन्द्र इनरुवामा पारेर इटहरीलाई ‘अस्तित्वविहिन’ बनाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
उता, इटहरीका पुर्व मेयर सर्वध्यव साँवा पनि इटहरी विभाजनमा खुसी छैनन् । निर्वाचन क्षेत्र विभाजनलार्ई व्यंग्य गर्दै साँवाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘चितवनको ध्रुवे हात्ति आएर इटहरीलार्ई तहसनहस बनाएछ है ।’
इटहरी विभाजनका सवालमा यसरी नेताहरुले सामाजिक संजालमा आपत्ति जनाउनु स्वभाविक छ । मेयर र उपमेयर पदका आकांक्षी नेताहरुले प्रदेश र संघको सांसद ताकिरहेको समयमा एक्कासी क्षेत्र निर्धारणका नाममा आफ्ना पकेट इलाकाहरु आधा एउटामा र आधा अर्कोमा परेपछि यसो भन्नु स्वभाविक हो । सुनसरीका ६ वटा क्षेत्रहरु हुँदा पुरा इटहरी क्षेत्र नम्बर २ मा थियो । तर हाल क्षेत्र संख्या चार पुर्याउदा इटहरीका ६ वडा देखि १५ सम्मका १० वडाहरु क्षेत्र नम्बर ३ मा परेका छन् । क्षेत्र नम्बर २ मा भने वडाहरु १ देखि ५ र १६ देखि २० सम्म मात्रै परेका छन् ।
२० वडामा आधा वडाहरु क्षेत्र नम्बर ३ मा र आधा वडाहरु क्षेत्र नम्बर २ मा परेका छन् । पहिले क्षेत्र नम्बर २ को चुनाव जित्न हालको इटहरी उपमहानगर क्षेत्रको जनमत मुख्य हुन्थ्यो । तर, अब त्यस्तो अवस्था रहेन । अब २ नम्बर क्षेत्रमा परेका इटहरीका नेताहरुले सो क्षेत्रमा पर्ने रामधुनिका वडाहरु १, २, ३, ५, ८ र ९ अनि इनरुवाका १, २, ५, ६, ९ र २० वडासम्म भोट माग्न जानुपर्ने भएको छ । यत्ति मात्रै हैन, दक्षिणी सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका पुरै र हरिनगराको वडा नम्बर २ पनि यो क्षेत्र अन्तर्गत परेको छ ।
आधा इटहरी परेको क्षेत्र नम्बर ३ माका संभावित सांसदहरुले पनि भोट माग्न गढि गाउँपालिका, बर्जु गाउँपालिका, दुहवी नगरपालिका, इनरुवाका वडा नम्बर ७ चाँदवेलासम्म पुग्नुपर्ने भएको छ । अर्थात् इटहरी र आसपासका मतदाताको मन जितेर चुनाव जित्दै आएकाहरुले अब भने दक्षिणी सुनसरी सम्मकै मतदाता तान्नुपर्ने देखिन्छ । अब २ महिना लगत्तै चुनाव हुने हुनाले इटहरी केन्द्रित राजनीति गरेका नेताहरुलाई आफ्ना भावि सांसद देख्न चाहेका कार्यकर्ताहरु निराश छन् ।
इटहरी नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिका हुँदा आसपासका गाविसहरु समेटिएर जोडिएको इटहरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका क्रममा भने टुक्रिएको छ । कतिपयले इटहरी क्षेत्र नम्बर ३का सांसद र वर्तमान उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अनुकुल क्षेत्रहरु तोकेको आरोप पनि लाएका छन । तर अस्ति डिप्लोमा इन्जिनियहरुको छाता संगठन डिनको कार्यक्रममा इटहरी आएका उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदारले भने आफुले गरेर इटहरी नटुक्रिएको बताए ।
‘६ क्षेत्र भएको सुनसरीलाइ ४ क्षेत्रमा झार्दा कतै न कतै त टुक्रिनै पर्ने थियो र यो यस्तो भएको हो’, आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गर्दै गच्छदारले भनेका थिए, ‘विगतमा पनि इटहरीका जनताले मलाई जिताएकै हो र मलाई इटहरी टुक्राउन मन हैन यो त क्षेत्र निर्धारण समितीको रिपोर्टको कुरा हो ।’
हुन त इटहरी जस्तै इनरुवा र रामधुनी पनि टुक्रिएर भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा परेका छन् । तर, इटहरी पुरा आधा–आधा भएर चिरिएकोले जन आक्रोश बढ्नु र नेताहरु तनावमा हुनु स्वभाविक हो । निर्वाचन क्षेत्र विभाजनको नाममा इटहरीको भुगोल टुक्रिएपछि इटहरीका भावनाहरु पनि केहि हदसम्म टुक्रिएका छन् । इटहरी केन्द्रित नेताहरुले अब मेयर हुन मात्रै इटहरी उपमहानगरको आफ्नो स्थापित जनमत काम लाग्ने र अरु बेला भने निर्णायक नहुने कुरा इटहरी टुक्रिँदाका घाटाहरु हुन् । तर, भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रका नाममा इटहरी टुक्रिनुका फाइदाहरु पनि छन् ।
इटहरी ‘टुक्रिदा’का ४ फाइदाहरु :
१. इटहरीमा हेमिवेट नेताहरुको कनेक्सन : इटहरीमा हालसम्म जोडिएका केन्द्रिय पकड राम्रो भएका नेतामा पुर्वमन्त्री र हाल राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)का उपाध्यक्ष राम कुमार सुब्बा मात्रै थिए । मुख्य तीन दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादीका मन्त्री वा केन्द्रीय पोर्टफोलियो स्तरका नेताहरु इटहरीसँग राजनीतिक रुपमा जोडिएका थिएनन् ।
तर, २ नम्बर क्षेत्र ताकिरहेका पुर्व पर्यटन मन्त्री तथा एमालेका केन्द्रिय सचिव तथा प्रदेश एक संयोजक भिम आचार्य अब इटहरीमा जोडिएका छन् । यस्तैगरि ३ नम्बर क्षेत्रका हेभिवेट नेताहरु विजयकुमार गच्छदार र भगवती चौधरी पनि अब इटहरी उपमहानगरपालिका भित्र जोडिने भएका छन् ।
इटहरीका दश वडाको जनमत तान्न र प्रदेश अनि केन्द्रको चुनाव जित्न गच्छदार र चौधरीले इटहरीको स्वामित्व स्वतः लिनेछन् । पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री भएका र एक पटक राज्यमन्त्री भएकी लोकप्रिय एमाले नेतृ भगवती चौधरी इटहरीमा जोडिनु सुखद् खबर हो । यस बाहेक समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि क्षेत्र नम्बर ४ र ३ मा नलडेर २ बाटै संघिय चुनाव लडेको खण्डमा पनि इटहरीमा जोडिने झिनो सम्भावना छन् ।
नेपालमा समानुपातिक विकास प्रणाली भनेपनि ठुला नेताहरु भएका क्षेत्रमा मात्रै ठुलो विकासका परियोजना सञ्चालन भएकोमा विजयकुमार गच्छदार, भीम आचार्य, भगवती चौधरीजस्ता शक्तिशाली नेताहरु पाउने इटहरीले त्यस्ता परियोजना ल्याउन आवश्यक केन्द्रिय राजनीतिक लबिङ पनि पाउनेछ ।
२. इटहरी केन्द्रित नेताहरुको बृहत्तर नेतृत्व विकासः अब प्रादेशिक सांसद र संघीय सांसदको लागि चर्चामा रहेका इटहरीका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले इटहरी मात्रै हैन गढि गाउँपालिकादेखि हरिनगरासम्मका आम मतदाताको भावना र विकासका आकांक्षाहरु बुझ्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको छ । हिजो इटहरी क्षेत्रमा पपुलर भएपछि सुफत् सांसद हुन्छु भन्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । अब इटहरीको मेयर नभए सांसद हुन्छु भन्ने दिन गएका छन् । र, नेताहरुलाई पुरा सुनसरी स्तरकै जनमत निर्माण गर्ने अवसर र चुनौति दुवै आएको छ ।
३. चुनावमा पैसा फ्याक्टरको आधा अन्त्यः अहिले नेपालका चुनावमा पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जितीन्छ भन्ने कुरा खुब छ । तर, अब बढेको निर्वाचन क्षेत्रको आयातनले यसलाई केहि कमजोर बनाँउछ । साथै निर्वाचन क्षेत्र कुनै खास जातिको एक्लो दबदबा नभएकोले पैसा हुँदैमा चुनाव चित्ने खुद्रा सपना पुरा नहुने अवस्था आएको छ ।
अब भने जनताको घरदैलो पुगेको अनि राम्रो एजेण्डा र संगठन भएकाहरुले मात्रै चुनाव जित्नलाई पैसा प्रभाव कम हुने देखिन्छ । पहिले पो इटहरीका २० वडामा यसो हल्का फुल्का पैसा दिएर पनि मतदाता प्रभावमा पर्थे । तर अब त कत्तिलाई दिएर सक्नु ?
४. पहाड–मधेश जोड्ने सेतुको निर्माणः इटहरी खासगरी पहाडे मुलका समुदाय बाहुल्य सुनसरीको दोस्रो उपमहानगरपालिका हो । तराइ–मधेशमा रहेको इटहरीका अधिकांश समुदायहरु तराईका भुमिपुत्र थारुहरु बाहेक अन्य भित्री मधेशका समुदायसँग जनस्थरबाट जोडिनुपर्ने जति जोडिएका छैनन् । तर, हरिनगरा र गढि गाउँपालिकासम्म इटहरीको आयतन क्षेत्र निर्धारणको क्रममा परेपछि यसको सम्पर्क त्यी क्षेत्रहरुका जनताहरु विचमा हुन्छ ।
राजनीतिक कार्यकर्ताहरु, जनताहरु, क्षेत्र स्थरका विभिन्न सामाजीक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाहरुको अन्तर घुलन बढेर जान्छ । यसले इटहरीलाई त्यि क्षेत्रहरुको पनि हब बनाउने छ । अरुबेला इनरुवासँग मात्रै जोडिने हरिनगरा र दुहबीसँग मात्रै जोडिने गढि र बर्जु गाउँपालिका इटहरीसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिने छन् ।
त्यो सँगै पहाड र मधेशका मनहरु पनि जोडिने छन् । भनाइ नै छ नि, जत्ति सम्पर्क बढ्छ त्यत्ति आत्मियता चुलिन्छ । हालको आत्मियता अबको क्षेत्र निर्धारणको भुगोलले झनै बढाएर लाने निश्चित छ । तर, हामी त्यसको लागि मन र मुुटुबाट तयारी चै हुनुपर्यो ।